Itoobiya: Shirka TPLF Abaabulay Ee Ka Socda Mekelle, Qodobbada Hurdada U Diiday Ra'iisal Wasaare Abiy Ahmed Ee Lagaga Hadlayo Iyo Go'aamada Laga Filayo - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaItoobiya: Shirka TPLF Abaabulay Ee Ka Socda Mekelle, Qodobbada Hurdada U Diiday Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed Ee Lagaga Hadlayo Iyo Go’aamada Laga Filayo
Mekelle (JigjigaOnline) – Magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya waxa ka furmay shir xaasaasi ah oo uu soo abaabulay xisbiga TPLF, kaas oo ay ka qayb-galeen xisbiyo kale oo mucaarad ah oo kasoo horjeeda siyaasadda cusub ee Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed iyo xisbigiisa Barwaaqada ee dhawaan lagu qasbay axsaabta kilillada ka talisa inay ku biiraan.
Shirka Mekelle oo soconaya laba maalmood waxa ka hadlay madaxweynaha Dawladda Deegaaanka Tigray oo ah guddoomiyaha TPLF, waxaanu si adag u dhaliilay Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed oo uu ku eedeeyey inuu jabinayo sharciga dalka, isla markaana baabi’inayo nidaamkii federaalka qowmiyadaha ku dhisan oo uu la yimid nidaam digtaatooriyad ah.
Madaxweynaha Tigre oo hadalkiisa ay ka muuqatay cadho, waxa uu si adag ugu hanjabay in aanay sinaba u dhici doonin in la burburiyo nidaamka federaalka oo ay iyagu badbaadin doonaan.
Waxa uu farriin u diray Culimada, aqoonyahanka iyo qaybaha bulshada oo uu ka codsaday inay ka taageeraan sidii ay u difaaci lahaayeen federaalka qowmiga ah, jilbahana dhulka ugu dhigi lahaayeen qorsheyaasha Ra’iisal Wasaaraha.
Muddada uu socdo shirku, waxa lagaga doonayaa isbeddellada siyaasadeed ee dalka, dastuurka dalka iyo qiimayn lagu samayn doono caqabadaha adag ee uu dalku galay, kuwaas oo ugu dambayn laga soo saari doono go’aamo adag oo la filayo inay ruxaan guud ahaan dalka.
Shirkan oo ah kii labaad ee noociisa ah, waxa lagu casuumay aqoonyahanno ka socda deegaamada, afhayeenka aqalka fadarayshanka Keria Ibrahim iyo siyaasiyiin kale oo culus.
Labada arrimood ee ugu xoogga badan ee go’aamada ugu culusna ay ku saabsanaan doonaan ayaa waxay yihiin xisbiga PP ee Ra’iisal Wasaare Abiy iyo doorashooyinka kusoo fool leh waddanka ee 2020 la qaban doono.